Firenena - TPAN - Ny Martsa Manerantany
Afaka mamandrika izao ianao ny bokin'ny diabe 2 an'izao tontolo izao
Diaben'ny Amerikanina Latina
Firenena - TPAN
Home » Firenena - TPAN
Ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fiadiana niokleary
Ny 7 2017 Jolay, taorian'ny folo taona ny asa amin'ny alalan'ny ICAN sy ny mpiara-miasa, ny ankamaroan'ny firenena eran-nanangana ny mari-toerana maneran-fifanarahana mba handrara fitaovam-piadiana nokleary, fantatra amin'ny fomba ofisialy ny Fifanarahana Momba ny Fandrarana ny fitaovam-piadiana nokleary . Hiditra ao amin'ny hery ara-dalàna rehefa nanasonia sy nanamarina izany ny firenena 56.
Ny zava-misy ankehitriny dia misy 86 izay nanao sonia ary 56 koa no nanamafy. Tamin'ny sasakalin'ny 22 Janoary 2021, nanomboka nanan-kery ny TPAN.
Lahatsoratra feno amin'ny fifanekena
Fanjakana misy sonia / ratification
Talohan'ny ny fanekena, fitaovam-piadiana nokleary no hany fitaovam-piadiana mahery vaika izay tsy manaiky tanteraka fandraràna (raha toa izy ireo fitaovam-piadiana simika sy bacteriological), na dia eo aza ny loza maha-olona sy ny tontolo iainana vokatry ny faharetan'ny ela. Ny fifanarahana vaovao dia mameno ny elanelana manan-danja amin'ny lalàna iraisam-pirenena.
Voararan'ny firenena ireo toetra ireo, fitsapana, mamokatra, fanamboarana, famindrana, manana, fitehirizana, fampiasana na mandrahona ny hampiasa fitaovam-piadiana nokleary, na mamela ny fitaovam-piadiana nokleary ao amin'ny faritra nijanona. Voarara koa izy ireo mba hanampy, mamporisika na hitarika na iza na iza hanao na inona na inona amin'ireto asa atao.
Ny firenena iray izay manana fitaovam-piadiana nokleary dia afaka miditra amin'ny fifanarahana, raha toa ka manaiky ny hamotika azy ireo araka ny drafitra mifandraika ara-dalàna sy ara-potoana. Toy izany koa, ny firenena iray izay misahana ny fitaovam-piadiana nokleary firenena iray hafa ao amin'ny faritaniny dia afaka miditra, raha toa ka manaiky ny hanafoana azy ireo ao anatin'ny fotoana voafaritra.
Ny Firenena dia tsy maintsy manolotra fanampiana ho an'ireo tra-boina rehetra amin'ny fampiasana sy fanandramana fitaovam-piadiana nokleary ary mandray fepetra ho an'ny fanarenana ny tontolo iainana voajanahary. Ny adihevitra dia manaiky ny fahavoazana vokatry ny fitaovam-piadiana nokleary, anisan'izany ny fiantraikany tsy dia mifangaro amin'ny vehivavy sy ny zazavavy, ary amin'ireo vahoaka indizeny manerana izao tontolo izao.
Ny fifanekena dia fifanarahana tao amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana any New York tamin'ny volana Martsa, Jona sy Jolay 2017, miaraka amin'ny fandraisana anjara mihoatra ny firenena 135 sy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny 20 September 2017 dia nosokafana ho soniavina. Maharitra izy ary ho voafatotra ara-dalàna ho an'ireo firenena izay miara-miasa aminy.
Ny fiaraha-miasa amin'ny TPAN izay miditra an-tsehatra dia iray amin'ireo laharam-pahamehana amin'ny Diabe ho an'ny Fandriam-pahalemana sy ny tsy Fahampiana.
Dokam-barotra momba ny sonia na ratification